Cunaqabateyno dheeri ah oo ka dhan ah xubno ka tirsan militariga Burma iyo qoysaskooda
Waa faallo ka tarjumeysa aragtida dowladda Mareykanka.
Mareykanka ayaa cunnaqabateyno dheeri ah ku soo rogay xubno ka tirsan taliska militari ee Burma iyo xubno ka mid ah qoysaska saraakiil hore loo cayyimay, iyadoo laga jawaabayo afgenbigii militariga ee bishii February iyo cadaadiska ay ku hayaan dhaqdhaqaaqyada dibad-baxayaasha dimuqraadiyad doonka ah ee Burma.
Xafiiska Xakamaynta Hantida Shisheeye (Office of Foreign Assets Control) ee loo soo gaabiyo OFAC ee Waaxda Maaliyadda Mareykanka, ayaa beegsatay 22 qof oo ku xiran nidaamka milatariga Burma, oo ay ku jiraan saddex xubnood oo dheeri ah oo ka tirsan Golaha Maamulka Dalka iyo afar xubnood oo xilal wasiir uu u magacaabay militarigu iyo sidoo kale 15 caruur qaangaar ah ama xaasaska saraakiil militari oo horey loo saaray cunnaqabateyn.
Intaas waxaa dheer, Waaxda Ganacsiga ayaa liiskeeda ku dartay Wanbao Mining, Ltd., laba ka mid ah shirkadaha ka hoos shaqeeya, iyo King Royal Technologies Co., Ltd. Shirkadahan ayaa dakhli iyo/ama taageero kaleba siiya militariga Burma. Wanbao Mining iyo shirkadaha hoosyimaada ayaa muddo dheer ku lug lahaa xadgudubyo xuquuqda shaqaalaha iyo kuwa xuquuqda aadanaha ah, oo ay ku jiraan macdanta naxaasta ah ee Letpadaungung.
Tallaabooyinkan, ayuu Xoghayaha Arrimaha Dibadda Antony Blinken ku yiri bayaan uu soo saaray, “waxa ay muujinayaan in aan sii wadi doonno in aan qaadno tallaabo dheeri ah oo ka dhan ah millatariga iyo hoggaamiyeyaashooda illaa ay ka laabanayaan go’aankooda ayna suurtagelinayaan dib ugu laabashada dimuqraadiyadda.”
Mareykanka waxaa ka go'an dhiirrigelinta la-xisaabtanka ficillada millatariga Burma, Golaha Maamulka Dalka, iyo dhammaan kuwa taageerada la garab-istaagay kuwa mas’uulka ka ah afgembigii militari. Mareykanku waxa uu sii wadi doonaa in uu ku boorriyo millatariga Burma in ay u hoggaansamaan oo ay hirgeliyaan go’aannadii ASEAN Five Point Consensus, ayna sii daayaan dhammaan maxaabiista sida xaq-darrada ah u xiran, islamarkaana ay si deg deg ah Burma dib ugu soo celiyaan hannaankeedii dimuqraadiga ahaa.
“Caburinta militariga ee dimuqraadiyadda iyo ololaha rabshadaha wuxuushnimada ah ee ka dhanka ah dadka reer Burma ayaa ah wax aan la aqbali Karin,” ayay tiri Agaasimaha OFAC Andrea Gacki. Cunnaqabateynada cusub ayaa muujinaya in uu “Mareykanku sii wadi doono in uu cadaadiska ku sii kordhiyo milatariga Burma uuna kor u qaadayo la xisaabtanka kuwa mas’uulka ka ah afgembigii militari iyo rabshadaha socda, oo ay ka mid yihiin in la bartilmaameedsado ilaha dakhliga ee saraakiisha militariga iyo hoggaamiyeyaashooda.”